Articles tagged 'zimbabwe peace project'
ZPP wants probe into abductions 26 November 2018 HARARE - The Zimbabwe Peace Project (ZPP) has called on government to investigate all reported cases of enforced disappearances and abductions and bring justice to the affected individuals and families. This comes as the world is preparing to celebrate the International Human Rights Day on Dec...
'Commission of inquiry not visible' 12 October 2018 HARARE - The Zimbabwe Peace Project (ZPP) says the commission of inquiry into the violence that occurred in Harare on August 1, resulting in the death of at least six people, is not conducting its work in a transparent manner. In its latest report, ZPP said it was not clear whether the general...
Zanu PF fingered in violence 22 May 2018 HARARE - Peace building civic group — the Zimbabwe Peace Project (ZPP) — has reported an increase in political violence, which it said was being perpetrated by both the ruling Zanu PF and the MDC. In its first quarter report on the human rights situation, the ZPP said the first three months of...
'Soldiers must return to the barracks' 16 December 2017 HARARE – Civil society organisations have said members of the Zimbabwe National Army (ZNA) must return to the barracks, further calling for the setting up of an independent body to investigate reports of civilian abuse by soldiers. Soldiers are still in the streets following a takeover of gove...
'Use peace to resolve challenges' 3 October 2016 HARARE - As Zimbabweans yesterday commemorated International Day of Non-Violence meant to endorse a United Nations General Assembly resolution on “the principle of non-violence and the desire to secure a culture of peace, tolerance, understanding and non-violence”, the country finds itself engulf...
Mukoko reveals grotesque torture 8 May 2016 HARARE - A new book detailing the brutal torture meted out on human rights activist Jestina Mukoko by the President Robert Mugabe regime, serves as a harrowing reminder of the true nature of the governing Zanu PF party. The Zimbabwe Peace Project (ZPP) national director exposed the horror of t...
ZPP condemns political violence 16 March 2016 HARARE - The Zimbabwe Peace Project (ZPP), a human rights watchdog, says Zanu PF should put a leash on its “rowdy members” who last week allegedly disrupted a rally by former Vice President Joice Mujuru's Zimbabwe People First supporters in Harare's Glen View suburb. The attack on ZPF came bar...
'Grace Mugabe food hand-outs looted' 21 December 2015 HARARE - First Lady Grace Mugabe's food hand-outs are being looted by a select few while the rest are left to fight, a report by the Zimbabwe Peace Project (ZPP) has claimed. In its monthly peace monitoring report, ZPP revealed that police assaulted and set dogs on villagers during the distrib...
Govt urged to end doctors' strike 13 November 2014 HARARE - A faith-based rights group has said it is greatly disturbed by the ongoing doctors’ strike in Zimbabwe, a situation that has led to an unacceptable loss of lives. The Jestina Mukoko-led Zimbabwe Peace Project (ZPP) said the State must take all practical measures to ensure the provisio...
De-escalate tension 19 November 2012 HARARE - Times are getting heated and at times political discussion is descending into physical confrontation. Tensions among Zimbabweans have become more pronounced as the election nears. Leading rights group Zimbabwe Peace Project notes in its latest bulletin that political tensions are slowly ...